Ku noqo Jidka vs 250ok: Email Soo-dejinta Soo-saarista iyo Adeegyada | Martech Zone
Maxay email ugu dirtaa muhiim? Sida laga soo xigtay Warbixinta Isbeddellada Tayada Xogta Emailka ee 2015 by Experian, 73% suuqleyda ayaa soo wariyay inay qabaan arrimo la xiriira gudbinta emaylka. Jidka Soo Celinta ayaa leh sidaana in ka badan 20% e-mayl sharci ah la waayo. Shaki la'aan, ganacsiyada waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga samatabbixinta, taasina waxay si xun u saameyneysaa khadka hoose.
Muddo sanado ah, Jidka Wadada wuxuu ahaa hogaamiyaha warshadaha meesha emaylka la isugeyn karo iyadoon wax badan, hadiiba, tartan jirin. Imaatinka 250ok, iyo saldhig macaamiil oo ay ku jiraan shirkadaha sida Adobe, Suuqa, iyo Act-On, warshaduhu ugu dambeyntii waxay leeyihiin sharci Beddelka Jidka Soo noqoshada loogu talagalay barnaamijyada waxqabadka iyo adeegyada xirfadeed.
Saxeex Usoco Dalxiis Badeecad
Marka la is barbar dhigayo Jidka Soo noqoshada iyo 250ok, saddex mowduuc ayaa sida caadiga ah soo baxa - Shahaadada, Xogta Gudiga Emailka, iyo Adeegyada Xirfadeed.
Soo Celinta Shahaadada Jidka
Shahaadadu waxay ahayd Rootada iyo subagga Jidka muddo sanado ah. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah macaamiishii hore ee internetka, waxay ahaan jirtay mid u qalantaa culeyskeeda oo dahab ah. Maanta, aasaaska Shahaadadu wuxuu umuuqdaa inuu ku saleysan yahay suuqleyda emailka oo la jaan qaadaya barnaamijyadooda e-mayl sida ugu wanaagsan. Ka dib markay la kulmaan heerkaas bilowga ah, macaamiisha waxaa looga baahan yahay inay sii wadaan inay ku sii dhex jiraan halbeegyadaas inta ay yihiin Shahaado. Sidaas yeeli maayo, sidaad filan lahayd, waxay keentaa dhibaatooyin la-soo-gaadhsiin.
Macaamiishaas ku dhex jira mitirrada, waa loo ballan qaaday hagaajinta gudbinta emaylka ee AOL, Yahoo, Microsoft, Comcast, Cox, Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, SpamAssassin, iyo SpamCop.
Si kastaba ha noqotee, Agaasimaha Badbaadinta Caalamiga ah ee Oracle, Kevin Senne, ayaa ku warramay inay hayaan tusaalooyin macaamiisha Shahaadada ee u hoggaansamaya ee la xiriira arrimaha la-soo-gaadhista ee lala yeelanayo qaar ka mid ah la-hawlgalayaasha adeegga internet-ka ee la xayaysiiyay (ISP). Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la ogaado sida joogtada ah ee looga hortago wada-hawlgalayaasha ISP ee ku dhaca macaamiisha u hoggaansamaysa, iyo sida ay taasi u dhacdo.
Marka loo eego Wadada loo laabo, Gmail caadi ahaan waxay samaysaa kala badh liisaska badankood, sidaa darteed Shahaadadu ma bixiso wiish farsamo halkaas ah. Waxay soo sheegaan in macaamiisha Shahaadadu ay sifiican uga shaqeeyaan Gmail marka loo eego kuwa aan shahaadada lasiin, wax ay ku tilmaamaan heerarka ugu fiican ee waxqabadka ee ay uga baahan yihiin macaamiisha inay raacaan. Warka fiicani halkan waa qofkasta oo raaci kara habdhaqanka ugu fiican adoon bixin dinaar iibiye kasta, laakiin waxaad ubaahantahay qalab si aad ula socoto barnaamijkaaga.
Marka, su’aasha ugu weyn ee macaamiisha Shahaadadu waa intee in le'eg ayay ubadkooda guushu ka imaanaysaa ahaanshaha dirista mas'uulka ah iyo wiishka farsamo ee laga helo wada-hawlgalayaasha ISP. Macaamiisha Shahaadooyinka ee hadda socda, tijaabinta dhinac-dhinac ah waxay u muujinaysaa inta wiishkeedu yahay ka dib marka la raaco dhaqamada ugu wanaagsan ee ka soo horjeedka mushaharka-u-ciyaarista ee ay ku gaadhaan wada-hawlgalayaasha ISP ee Shahaadada. Waxay qaadataa xoogaa dadaal ah si loo tijaabiyo, laakiin suuqleyda xogta wadata waxay ogyihiin in cabirku yahay furaha guusha.
250ok ma bixiso Shahaado. Habka ay u socdaan ayaa sidoo kale ku saleysan raacitaanka hababka ugu fiican, sida Wadada Soo-noqoshada, laakiin halkii laga bixin lahaa qaabka lacag-u-ciyaarista, waxay awood u siinayaan soo dirahayaasha xogta waqtiga-dhabta ah si ay si wax ku ool ah ugu maareeyaan barnaamijkooda uguna guuleystaan ​​sumcad diraha adag
Soo Celinta Xogta Gudbinta Emailka Jidka
Jidka Soo Celinta waxay isticmaashaa xogta galka iimaylka oo lagu daray liisaska liistada si loo qiyaaso gaarsiinta, halka 250ok waxay isticmaashaa liisaska liistada abuurista iyo xogta ka-qayb-qaataha qaataha.
Hal arin oo suurtogal ah oo laxiriira xogta gudiga ayaa ah hadii xubnaha wax qora ay ka warqabaan xogta ayaa la qodayaa oo dib loo iibinayaa. Ogolaansho ma siiyeen? Haddii kale, taasi miyey u shaqeysaa sumaddaada? Mar labaad, ma garanayo asalka guddiga 'Return Path' iyo haddii isticmaaleyaashu ogolaadeen inay ka qaybgalaan, markaa fadlan ka hubi iyaga.
Suuqge ahaan, waxaan jecelahay xogta gudiga fikradaha ay bixin karaan. Laakiin marka laga hadlayo xogta guddiga Path Path, iyagu Warbixin in kaliya 24% ka mid ah xubnahooda waxay u isticmaalaan koontada inay yihiin koontadooda emaylkooda koowaad.
Markaad la macaamilayso xogta guddiga nooc kasta ha noqotee, waxaa habboon in la weydiiyo iibiyaha goortii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay. Badbaadada Badbaadadu waa arrin aadan rabin inaad ku dhex dhacdo guddigaaga. Mar labaad, ka hubi Wadada Soo Laabashada.
Marka la eego meelaynta sanduuqa, dhibaatadu badanaa waxay tahay in xogta guddiga ay muujin doonto in ka yar 100% meelaynta sanduuqa ee Outlook iyo Gmail sababtoo ah shaandhaynta shaqsiyaadka isticmaala. Natiija ahaan, dadka wax diraya waxaa looga tagi karaa inay la yaaban yihiin haddii farqiga meelaynta sanduuqa ay keeneen shaandhaynta heerka isticmaalaha ama haddii ay jirto dhibaato la soo gudbineed oo dhab ah.
250ok ma adeegsato xogta gudiga emaylka. Waa aragtidooda ah in xogta waxqabadka leh ay ku dhexjirto xogta kaqeybgalka ee aad ka faa'iideysan karto iyada oo loo marayo 250ok's Email Informant, oo bixisa faahfaahin faahfaahsan, heerka waxqabadka heerka isticmaalaha, marka lagu daro Analytics waxaa bixiya adeeg bixiyaha emaylkaaga (ESP). Waa iskudhafka qalabkan ayaa ku siin doona sirdoonka emayl ee ugu dhameystiran ee la heli karo.
Jidka Soo celi iyo 250ok Adeegyada Professional
Labada shirkadoodba waxay macaamiisha u fidiyaan la-talin gudbinta. Farqiga ugu weyn: Jidka Soo-celinta wuxuu dhisay koox lataliyayaal gudaha ah, halka 250ok ayaa doorbiday inay lashaqeeyaan wakaaladaha wax geynta dibadda.
Iyadoo aan loo eegin haddii aad ka fiirsaneyso 250ok, waa muhiim inaad weydiiso su'aalo adag lataliyaha maamuli doona koontadaada. Aniga ahaan, dhib malahan hadii aan la macaamilayo la-taliye guri dhexdiisa ah ama hay'ad wadaag ah. Waxaad ubaahantahay qof leh sanado, maahan bilo, khibrad ah, waxayna ubaahanyihiin xiriiro ISP-yada waawayn ee dhacdada sixitaanka hadii loo baahdo. Weydiiso dib-u-soo-celinta iyo tixraaca macaamiisha ee la-taliyaha kaas oo noqon doona qofkaaga dhibcaha. Ku dhajinta la-taliyaha da'da yar ee ka akhriya qoraalka wuxuu u horseedi karaa dhibaato weyn barnaamijkaaga.
Dib u eegis deg deg ah oo ku saabsan 250ok madal
Tan iyo markii ay 250ok waa barta cusub ee goobta ka socota, waxaan doonayay inaan si dhakhso leh u daboolo qaybtooda: Sumcadda Macluumaadka, Inbox Informant, Email Informant, Design Informant, iyo DMARC. Markaad isticmaaleyso dhammaan afarta qaybood ee riwaayadaha, suuqleyda waxay leeyihiin agab geddisan oo dhammaystiran oo ay ku maareeyaan barnaamijyadooda.
Macluumaad sumcad leh - Xog-hayaha Sumcadda waxaa ka mid ah astaamo kala duwan oo kormeera sumcadda emaylkaaga.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee 250ok xalku waa iyaga Shabakada dabinka spam ee kudhowaad 35 million domains. Helitaanka xogtan waa mid aan caqli-gal ahayn suuq-geynta emaylka. Baaxadda iyo tayada shabakadda dabinka spam, iyo marin u helidda xogta waqtigaas dhabta ah (tusaale ahaan, dabinku wuxuu ku dhacayaa maalinba maalinta ka dambaysa, IP, domain, khadka mawduuca, waddanka), ayaa si aad ah iiga codsanaya aniga oo ah diraha. Kormeerka liiska madow? Xogtaan waxaa lagu heli karaa waqtiga-dhabta ah, waxaadna dejin kartaa digniino la habeeyay si aad diirada u saarto liisaska aad adiga aadka kuu daneyso. Waxaan jeclahay dabacsanaanta la qaabeynta cidda heleysa digniinta iyo sida digniintaas loo gudbinayo (tusaale, emayl, SMS).
Dashboardka DMARC - Markii la tixgeliyey kororka tirada badan ee spam iyo isku dayga tuugada, iyo falcelintii ugu dambeysay ee Gmail, waxay ahayd tallaabo wanaagsan 250ok in lagu daro muraayada DMARC. Waad isticmaali kartaa "habka indha indheynta" iyo softiweerku wuxuu falanqeyn doonaa u hoggaansamida wuxuuna soo jeedin doonaa ficil sixitaan ah, oo ugu dambeyntii kugu hagaya go'doominta ama diidmada siyaasadda. Shayga waxaa ka mid ah khariidaynta hanjabaadaha, warbixinta dembiga, iyo dhibcaha u hoggaansamida.
250ok waxay bixisaa awooda lagu dhexdhexaadinayo kormeerka wareejinta jawaab celinta (FBL). Ogaanshaha marka macaamilku kaa cawdo waa mid muhiim ah, maadaama xawaaraha jawaabtaadu ay tahay midda ugu weyn ee ka ilaalinaysa bixiyeyaasha adeegga internetka (ISPs) inay hoos ugu dhacaan sumcaddaada.
Sidoo kale, 250ok ayaa isku dhafay Adeegyada Macluumaadka Microsoft Smart Network (SNDS) iyo Signal Spam galay UI-ga si fudud loo shiidi karo. Macluumaadkan wuxuu ka yimid Microsoft isagoo ah mid qasan, oo aan la soo koobi karin oo xog cayriin ah, iibiyeyaasha qaarna ay sameeyeen wax aad u yar si ay u horumariyaan khibrada cunista xogtaas. 250ok ayaa ka baxday jidkoodii si ay uga dhigaan mid fudud.
Xog-ogaal Inbox - Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin qalab casri ah oo casri ah oo ka caawiya inay ku soo degaan sanduuqa. Macluumaadka Inbox-ka ayaa ku tusaya inta meylkaagu ku dhacay sanduuqa, spam, iyo inta la waayey. Waad ku burburin kartaa arrimaha gudbinta emaylka gaarka ah olole, oo waxtar badan leh.
Mid ka mid ah farqiga ugu muhiimsan ee aan ogaaday inta udhaxeysa 250ok iyo Wadada loo laabo waa wadarta 250ok ee abuurista. Kahor intaadan kugu mashquulin isbarbardhiga caymiska, abuurka kaliya ee muhiimka ah waa bixiyeyaasha sanduuqa boostada ee aad boostada ugu dirto. Muddada. 250ok waxay dhistay aalad liistada abuurista ah si ay kaaga caawiso inaad laser gasho martigaliyayaasha arrinta. Guud ahaan, waxaa jira kala duwanaansho yar oo ku saabsan caymiska liistada iyada oo labada shirkadoodba ay hayaan qaar ka mid ah abuurka gaarka ah, laakiin halkaas ayay ku faraxsan tahay ku dhowaad dhammaan martida weyn. Labada shirkadoodba waxay u badan tahay inay haystaan ​​waxaad u baahan tahay ama aad ku heli doontid.
Xog-waraha Emailka - Adduunyada xogta lagu kexeeyo, furan oo CTRs ma sheegaan sheekada oo dhan. Kaalaynta pixel pixel 250ok oo leh Email Informant ayaa kuu sheegaysa kuwa macaamiisha ah ee akhriya farriinta iyo muddada, iyo nooca qalabka iyo nidaamka hawlgalka ee ay isticmaalayeen.
Waa kuwee xiriiriyeyaasha ama CTA-yada sida ugu fiican u qabtay? Miyaad kafiicantahay waqtiyada dirista? Email Information wuxuu kaa caawinayaa inaad fahanto waxa shaqeeya iyo waxa aan ahayn si aad u gaarto go'aanno xariif ah oo dhaqso badan.
Xogheynta Naqshadeynta - Xaraashle kasta oo iimayl ah wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo qiimeyn duulimaad ka hor oo ku saabsan naqshadeynta, sidaas 250ok waxay leedahay iskudhafka-sanduuqa-ka-dhex-dhexaadinta iyada oo ay la socdaan kuwa wax iibiya Iimayl ku qor Acid iyo Litmus.
Naqshadeynta Macluumaadka waxay tijaabisaa hal-abuurkaaga ka-hortagga miirayaasha spam-ka ee caadiga ah oo ay ku jiraan Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook, iyo kuwo kaloo badan si aad u aqoonsato oo aad u hagaajiso waxyaabaha kiciya spam ka hor intaadan ololeyn.
Waxaan u maleynayaa in haysashada laba iibiyeyaal oo aad isugu eg laakiin waxyar ka yara duwan booska emaylka la gaarsiin karo ay tahay wax ku wanaagsan warshadaha. Haddii aad wax uga iibsanaysid softiweerka gudbinta, oo ay ku jiraan qalabka DMARC, ama adeegyada la-talinta, waxaan kugula talinayaa inaad la xiriirto Return Path iyo 250ok demo, oo isbarbar dhig naftaada.
Waad ku mahadsantahay aqrinta iyo hadii aad kahesho jawaab celin midkood Wadada Soo noqoshada ama 250ok alaabooyinka, fadlan xoriyad inaad ila wadaagto macluumaadkaas, ama faallo hoose.
Shaacinta: Oracle waa summad ka diiwaan gashan shirkadda Oracle iyo / ama kuwa ku xiran. Soo-celinta Jidka waa summad ka diiwaan gashan Return Path, Inc. 250ok waa summad ka diiwaan gashan 250OK LLC. 250ok yihiin maalgeliyeyaasha boggeena waxaan saaxiib fiican la ahay aasaasaha Greg Kraios.
Tags: androidAndroid 2.3Falanqeynta emaylka Android 2.3Imtixaanka horudhaca ah ee Android 2.3 emaylkaAndroid 4.2Falanqeynta emaylka Android 4.2Imtixaanka horudhaca ah ee Android 4.2 emaylkaFalanqeynta emaylka AndroidImtixaanka eegista emaylka AndroidAOL MailAOL boostada ChromeAOL booqo horudhaca emaylka ChromeAOL u dir imtixaanka aragtida emaylka ChromeFalanqaynta emaylka AOL MailImtixaanka hordhaca emailka AOL MailAOL Mail Internet ExplorerFalanqeynta emaylka AOL Mail Internet ExplorerImtixaanka horudhaca emailka AOL Mail Internet ExplorerApple Mail 6Apple Mail 6 Falanqeynta emaylkaApple Mail 6 tijaabada horudhaca emailkaBlackBerry 4 OSBlackBerry 4 OS eegis emailBlackBerry 4 OS tijaabada aragtida emaylkaBlackBerry 5 OSBlackBerry 5 OS eegis emailBlackBerry 5 OS tijaabada aragtida emaylkaogeysiiska liiska madowIndho La'aantaMidabada Indho la’aan Indho indheynTijaabada horudhaca muuqaalka midabka Indhooleelka MidabkasamatabbixinDMARCemail xayirayagaarsiinta emaylkaimtixaanka naqshada emaylkawargeliyaha emaylkaxogta gudiga emaylkasumcadda emailkaGmailGmail AppFalanqeynta Email App ee Gmail AppImtixaanka aragtida Email App ee Gmail AppGmail ChromeAragtida Gmail ChromeImtixaanka aragtida emailka 'Gmail Chrome'Gmail FirefoxFalanqeynta emaylka Gmail FirefoxImtixaanka aragtida emailka 'Gmail Firefox'Email Internet ExplorerFalanqeynta emaylka Gmail Internet ExplorerImtixaanka Falanqeynta Emailada Gmail Internet Explorergreg kraiosfalanqaynta sanduuqawargeliyaha sanduuqameelaynta sanduuqaipadFalanqeynta emaylka iPad-kaImtixaanka aragtida emailka iPad-kaipad miniiPad Mini eegis emailImtixaanka aragtida iPad Mini iPadiPad RetinaiPad Retina aragtida emaylkaIpadka Retina imaylka aragtida imaylkaiPhone 4siPhone 4s Falanqeynta emaylkaiPhone 4s imtixaanka eegista emailiPhone 5iPhone 5 Falanqeynta emaylkaiPhone 5 imtixaanka aragtida emailiPhone 5siPhone 5s Falanqeynta emaylkaiPhone 5s imtixaanka eegista emailiPhone 6iPhone 6 Falanqeynta emaylkaiPhone 6 imtixaanka aragtida emailiPhone 6 PlusiPhone 6 Plus Falanqeynta emaylkaiPhone 6 Plus tijaabada aragtida emaylkauur qaadistabaaritaanka emailka ispliifQoraalada Lotus 6.5Lotus Notes 6.5 Falanqeynta emaylkaLotus Notes 6.5 tijaabada horudhaca emailkaQoraalada Lotus 7Lotus Notes 7 Falanqeynta emaylkaLotus Notes 7 tijaabada horudhaca emailkaQoraalada Lotus 8Lotus Notes 8 Falanqeynta emaylkaLotus Notes 8 tijaabada horudhaca emailkaQoraalada Lotus 8.5Lotus Notes 8.5 Falanqeynta emaylkaLotus Notes 8.5 tijaabada horudhaca emailkaMAC OS XMAC OS X eegis emaylMAC OS X imtixaanka horudhaca emailkaMISROSOFT WINDOWSMICROSOFT WINDOWS eegis emaylMICROSOFT WINDOWS tijaabada horudhaca emailkaMuuqaalka 2000Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2000'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2000'Muuqaalka 2002Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2002'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2002'Muuqaalka 2003Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2003'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2003'Muuqaalka 2007Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2007'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2007'Muuqaalka 2010Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2010'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2010'Muuqaalka 2011Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2011'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2011'Muuqaalka 2013Muuqaalka muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2013'Imtixaanka aragtida muuqaalka muuqaalka 'Outlook 2013'Muuqaalka.com (Firefox)Outlook.com (Firefox) eegis emaylOutlook.com (Firefox) tijaabada horudhaca emaylkaMuuqaalka ChromeFalanqeynta emaylka Outlook.com ChromeImtixaanka horudhaca ah ee muuqaalka 'Outlook.com Chrome'Internet ExplorerFalanqeynta emaylka ee Outlook.com Internet ExplorerImtixaanka horudhaca emailka Outlook.com Internet ExplorerQoraal cadFaahfaahin qoraalka Falanqaynta qoraalkaPlain Text eegis eegis e-maylwariye sumcaddib u noqoshadanoqoshada wadada kalesoo celinta shahaadadadabinka spamshabakada dabinka spamspam kiciyaThunderbird ugu dambaysay WEB-SALSANThunderbird muuqaalkii ugu dambeeyay ee WEB-BASEDThunderbird tijaabinta horudhaca aragtida emaylka ee WEB-BASEDWindows Phone 8Windows Phone 8 Falanqeynta emaylkaWindows Phone 8 tijaabada horudhaca emaylkaYahoo! Fariin u dir ChromeYahoo! Fariinta fiirinta emaylka ChromeYahoo! Boostada tijaabada aragtida emaylka ChromeYahoo! Boostada FirefoxYahoo! Boostada fiiri emaylka FirefoxYahoo! Boostada tijaabada aragtida emaylka ee FirefoxYahoo! Boostada Internet ExplorerYahoo! Boostada fiiri emailka InternetkaYahoo! Boostada tijaabada aragtida emaylka ee Internetka
Waa maxay Google RankBrain?
Oktoobar 7, 2014 at 2:35 PM
Qalab cusub oo suuqgeyn email ah, waxaan u maleynayaa in dadku la yaabi doonaan emaylka markay helaan xog fiican.
Aqoonyahan cilmiyaysan oo dhab ah
Agoosto 16, 2016 saacaddu markay ahayd 10:47 PM
Hagaag taasi waxay dishay sharcinimada qoraalkan “250ok waa kafaala qaadayaal bartayada waxaanan saaxiib fiican la ahay aasaasaha Greg Kraios”
Haa, waxaan saaxiib la ahay Greg oo aragtidan lahaa toban sano ka hor haddana la tartamaya shirkad weyn oo leh tanno suuq geyn ah. Waan ku faraxsanahay inaan ka caawiyo faafinta erayga xalkiisa cajiibka ah. Aniguna aad ayaan ugu mahadnaqayaa kafaala-qaadayaasheena taageera boggan waxayna iga caawiyaan inaan macluumaad dheeraad ah siiyo aqristayaasheena Shaacinta ayaa ah mid hufan waana in loo sacbiyaa, laguma majaajilo faallo faallooyin aan la garanaynin oo aad uga baqaysa inay bixiso magac dhab ah ama cinwaan emayl dhab ah.
Macaamiil kale oo Cert ah oo halkan jooga oo arkaya xannibaadda la-hawlgalayaasha Wadada Soo-celinta? Waad ku mahadsan tahay hufnaanta, Douglas! Xusuusnow, ficil kasta oo wanaagsan oo ciqaab ah lama mariyo. 😉
Douglas, waad ku mahadsan tahay maqaalka; Waan ku raacsanahay inay muhiim tahay in wax laga ogaado xulashooyinkaaga marka aad dooranaysid lammaane la wadaagi karo. Waxaan ka walwalayaa, si kastaba ha noqotee, inaad awoodi kari weyday inaad soo bandhigto mowqif dhab ah eex la'aan ah isbarbardhigaaga maaddaama aad labadiinaba xiriir xirfadeed iyo mid shaqsiyeedba la leedihiin 250ok, sida ku xusan shaacintaada. Waxaan sidoo kale xusay dhowr su'aalood oo kujira gorfayntaada Jidka Soo noqoshada, waana ka xumahay inaadan nasoo gaarin si aan kaaga caawino buuxinta meelaha banaan. Maadaama aan ahay maamulaha suuqgeynta wax soo saarka ee xalkayaga Email Optimization, waxaan ahaan lahaa - walina waan ku faraxsanahay inaan kaa caawiyo inaad ka jawaabto su'aalahaas.
Si aan uga jawaabno mid ka mid ah su'aalahaaga - haa, xubnaha guddigayaga 'Network Consumer Network' waxay runtii bixiyeen oggolaanshaha Jidka Soo-celinta si ay u helaan adeegsiga sanduuqa boostadooda iyo xogta hawlgelinta. Waan ku faraxsanahay inaan macluumaad dheeraad ah ka bixiyo tan haddii aad rabto.
Jidka Ku Noqoshada, waxaan aad ugu faraxsanahay xogta gaarka ah ee aan awood u siineyno xalalkeena iyo aragtida xogtaan ay siiso macaamiisheenna. Waan ognahay in fikradaha xogta ku saleysan ay lagama maarmaan u yihiin emaylka barnaamijka suuqgeynta guusha, waana muhiim in suuqleydu ay go'aan ka gaarayaan iyagoo ku saleynaya xogta macaamiishooda dhabta ah. Waxaan ku kalsoonahay inaan dhahno suuqleyda emailka ee runtii doonaya inay kobciyaan barnaamijkooda emayl isla markaana arkaan ROI hagaageysa emaylka ayaa ka faa'iideysan doona iskaashi la leh Wadada Return. Sidaad xustay, waxaan haynaa xogta, xidhiidhada warshadaha, iyo aqoonta iimaylka ee khabiirka ah ee ka caawin kara suuqleyda inay kordhiyaan dakhligooda ka yimaada emaylka iyaga oo kordhiya gaadhista emaylkooda, dhisida xidhiidhada macmiil fiican, iyo inay ku fiicnaadaan emaylladooda hawlgelinta la hagaajiyay.
Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad la xiriirto. Shaki kuma jiro ballaadhkiisa, gaadhistiisa, iyo raadadka uu ku soo laaban doono Wadada loo maro wershadaha samatabbixinta. Waad ku mahadsantahay cadeynta arinta helitaanka xogta sidoo kale.
Tartanka had iyo jeer waa wax weyn, oo aan u isticmaalnay qalabka '250ok' ee qalabkayaga 'ESP', waxaan gabi ahaanba la dhacnay natiijooyinka. Markaa inta aan saaxiib nahay oo ay yihiin kafaala qaadayaal, waxaan sidoo kale nahay macmiil iyo isticmaale barnaamijkooda. Jawaab celintaas ma ahan mid gebi ahaanba xag-xagasho ah - waligeyna talo kama soo jeedin doono barxad aanan ka faa'iideysan markii hore.
Mar labaad Mahadsanid!
5, 2016 at 12: 02 PM
Sida khabiir ku xeel dheer arrimaha Faransiiska, waxaan la yaabanahay inaad soo jeediso RP inuu hagaajiyo waxqabadka kororka ee Orange. Liin dhanaan ha isticmaalin Shahaadada RP.
6, 2016 at 4: 21 AM
Haa way sameeyaan: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
18, 2017 at 2: 05 PM
Waxaan xiiseynayaa isbarbardhiga qiimaha sidoo kale. Hadda waxaan isticmaalaa 250ok hadda, laakiin waan ka labalabeyaa inaan maro nidaamka demo aniga oo aan ugu yaraan ogaanin isbarbar dhig qarash ah oo u dhexeeya 250ok iyo waddada ku laabashada